9 Devid wee sị: “Ọ̀ dị onye ọzọ fọdụrụ n’ụlọ Sọl, ka m wee gosi ya obiọma*+ n’ihi Jọnatan?”+ 2 O nwere otu onye na-eje ozi n’ụlọ Sọl, onye aha ya bụ Zaịba.+ Ha wee kpọtara ya Devid, eze wee sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ Zaịba?” o wee zaa, sị: “Abụ m ohu gị.” 3 Eze wee sị: “Ọ̀ bụ na ọ dịghị onye ọzọ fọdụrụ n’ụlọ Sọl, ka m wee gosi ya obiọma Chineke?”+ Zaịba wee sị eze: “A ka nwere nwa Jọnatan, bụ́ onye dara ngwọrọ.”+ 4 Eze wee sị ya: “Olee ebe ọ nọ?” Zaịba wee sị eze: “Lee! Ọ nọ na Lo-diba+ n’ụlọ Mekia+ nwa Amiel.” 5 Ozugbo ahụ, Eze Devid ziri ozi wee kpọpụta ya n’ụlọ Mekia nwa Amiel nke dị na Lo-diba. 6 Mgbe Mefiboshet nwa Jọnatan nwa Sọl bịakwutere Devid, o gburu ikpere n’ala ozugbo, kpudo ihu n’ala wee kpọọ isiala.+ Devid wee sị: “Mefiboshet!” o wee sị: “Lee ohu gị.” 7 Devid wee sị ya: “Atụla egwu, n’ihi na aghaghị m igosi gị obiọma+ n’ihi Jọnatan nna gị;+ m ga-enyeghachikwa gị ala+ niile bụ́ nke Sọl nna nna gị, gị onwe gị ga na-erikwa nri na tebụl mụ mgbe niile.”+ 8 O wee daa n’ala, sị: “Ònye ka ohu gị bụ, nke na i chewo ihu gị n’ebe nkịta nwụrụ anwụ+ dị ka m nọ?” 9 Eze wee kpọọ Zaịba, bụ́ onye na-ejere Sọl ozi, wee sị ya: “Ihe niile Sọl na ụlọ ya dum nwere ka m na-enye+ nwa nwa nna gị ukwu. 10 Ị ga na-akọrọ ya ala, gị na ụmụ gị na ndị na-ejere gị ozi, ị ga na-ewetakwa ihe ubi, ọ ga-abụkwa ihe ndị niile bụ́ ndị ezinụlọ nwa nwa nna gị ukwu ga na-eri, ha ga na-erikwa nri; ma Mefiboshet, nwa nwa nna gị ukwu, ga na-eri nri na tebụl mụ mgbe niile.”+ Zaịba nwere ụmụ ndị ikom iri na ise na mmadụ iri abụọ na-ejere ya ozi.+ 11 Zaịba wee sị eze: “Dị nnọọ ka onyenwe m eze nyere ohu ya n’iwu, otú ahụ ka ohu gị ga-eme; ma Mefiboshet+ na-eri ihe na tebụl mụ dị ka otu n’ime ụmụ eze.” 12 Mefiboshet nwekwara nwatakịrị nwoke aha ya bụ Maịka,+ ndị niile bi n’ụlọ Zaịba bụ ndị na-ejere Mefiboshet ozi. 13 Ma Mefiboshet bi na Jeruselem, n’ihi na ọ bụ na tebụl eze ka ọ na-eri nri mgbe niile;+ ọ dakwara ngwọrọ.+